True Stories – Mood for Movies
Ron Howard ရိုက်တယ်ဆိုကတည်းက ကောင်းမယ်လို့ထင်ပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်ထိကောင်းမယ်လို့တော့ မမှန်းထားဘူး။ Gravity ပြီးရင်တော့ ၂၀၁၃ အတွက် အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကားပါပဲ။ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်ကျော်တွေက Formula 1 ကားမောင်းပြိုင်ပွဲမှာ အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ James Hunt နဲ့ Niki Lauda တို့အကြောင်း ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဒီနေ့ထိလည်း သူတို့နှစ်ယောက်ဘယ်သူပိုကောင်းလည်းဆိုတာကို သူ့ပရိသတ် ကိုယ့်ပရိသတ် ငြင်းခုံနေကြဆဲပါ။ James Hunt ရဲ့စရိုက်ဟာ မိုက်ရူးရဲဆန်တယ်၊ အပျော်အပါးမက်တယ်၊ မြာပွေတယ်။ (သူ့ဘဝတစ်လျောက် မိန်း
True Stories Drama
ကျွန်တော် Reviews တွေ မရေးတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ပေမဲ့ Page ကို Likes 10,000 ပြည့်သွားခြင်း အထိမ်းအမှတ်ရယ် ဟိုတစ်နေ့က မှ ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ယခုထိတိုင် စိတ်ကူးတွေထဲမှာရော နှလုံးသားထဲမှာပါ ဝင်ရောက်နေတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားကို ပြောပြချင်တဲ့ စိတ်ရယ် တိုက်ဆိုင်သွားပြီး The Theory of Everything ကို ကျွန်တော် ယခုရေးလိုက်ပါတော့တယ်။ ဒီကားကို ကျွန်တော် အရမ်းကြီး ညွှန်းပြနေစရာ မလိုဘူးလို့အရင်ဆုံးတွေးမိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတေ့ာ လူတိုင်းနီးပါးလည်း ကြည့်ပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင် ဒီနှစ် Oscar ပေးပွဲမှာ Best Actor ဆုကိ
ကျွန်တော် သာမာန်အားဖြင့် Biography ရုပ်ရှင်တွေကြည့်လေ့ကြည့်ထ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ Director Steven Soderbergh က Che Guevara အကြောင်းရုပ်ရှင်ရိုက်နေတယ်ဆိုတာ ကြားတာနဲ့ကြည့်ချင်စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒီကား2ကားကိုထွက်ထွက်ခြင်း သွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ကြည့်ရကျိုးလည်းတော်တော်နပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် မနေ့ည က Che Guevara ရဲ့လူငယ်ဘဝအကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ Motorcycle Diaries ဆိုတဲ့ ကားလေးကို တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခု ဒီ နှစ်ကားကတော့ Che Guevara ရဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေနဲ့နောက်ဆုံးနေဝင်ချိန် နှစ်တွေကို သရုပ်ဖော်ပေးထားတ
သင့်ကိုယ်သင် အာကာသယာဉ်မှုးတစ်ယောက်အဖြစ် တွေးကြည့်လိုက်။ သင့်မိသားစု၊ မိတ်ဆွေတွေကို ချန်ထားရစ်ခဲ့ရတော့မယ်။ အောင်မြင်မလား၊ မအောင်မြင်ဘူးလားလို့မသေချာတဲ့ ခရီးစဉ်၊ မဟုတ်သေးဘူး။ သေမလား၊ ရှင်မလား သေချာမသိတဲ့ ခရီးရှည်ကြီးတစ်ခု။ သင့်ဘဝ၊ သင့်အသိ နဲ့သင့်အသက်ကို ပေးဆပ်ရမဲ့ ခရီး။ ဒါဆိုကောင်းပြီ။ အာကာသယာဉ်မှုးတစ်ယောက်အဖြစ် သင်ခုနက တွေးကြည့်ပြီးပြီ။ အခု အာကာသယာဉ်မှုးတစ်ယောက်အဖြစ် ခံစားကြည့်လိုက်။ အာကာသဝတ်စုံကို အပြည့်ဝတ်ဆင်ပြီး ယာဉ်ပေါ်ကို တက်ဖို့လမ်းလျှောက်လာနေတယ်။ ထို့နောက် ကျဉ်းမြောင်းလှတဲ့ ယာဉ်မောင်းနှင်တ
အဖြစ်အပျက်တွေက ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီ။ မြန်ဆန်လွန်းတယ်လို့တောင် ဆိုထိုက်တယ်။ တဒင်္ဂအောင်မြင်မှုဆိုတာလည်း သူ့နောက်ကနေ လိုက်လာခဲ့နေပြီ။ သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်က မှားလား မှန်လား။ သူကိုယ်တိုင် ဒွိဟတွေ ဝေနေခဲ့ပြီ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုယ်သူတော့ သူယုံကြည်တယ်။ ယုံကြည်ချင်စရာလည်း ကောင်းမှာပေါ့။ အဖြစ်အပျက်က သက်သေထူခဲ့ပြီလေ။ ဒါပေမဲ့ မရဏသေမင်းဆီကို ခေါ်ဆောင်သွားစေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို သူကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ထိုအိပ်မက်ဆိုးတွေကတော့ ယနေ့တိုင် သူ့ကိုခြောက်လှန့်နေဆဲ။ အကယ်၍ သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သာ မှားယွင်းခဲ့ပါက … --------------------
Jackie wasaqueen withoutacrown, who lost both her throne and her husband. ဒီစကားကိုပြောခဲ့သူကတော့ ယခုရုပ်ရှင်ကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Director Pablo Larraín ကိုယ်တိုင်ပါ။ American သမ္မတကြီး John F. Kennedy လုပ်ကြံခံရမှုကို ယနေ့တိုင် Media တွေ Entertainment features တွေ အမျိုးမျိုးကနေ တွေ့မြင်ခဲ့ပြီးပြီ။ ဒါပေမဲ့ ထိုနေ့က ထိုကားပေါ်မှာ လိုက်ပါလာရင်း မိမိခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ မိမိလက်ပေါ်မှာတင် ခေါင်းပွင့်ထွက်ကာ သေဆုံးသွားတာကို မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အကြောင်းကိုပုံဖော်ခဲ့တာကြတော့ အလွန်ရှားပါး
ဒီနေ့ဟာ Director Christopher Nolan ရဲ့အသက် 47 နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပါ။ ဒီ Review ကို နောက်အပတ်မှ တင်မယ်လို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ သူ့မွေးနေ့အတွက် ကျွန်တော့် လက်ဆောင်ကတော့ သူ့ရဲ့Dunkirk အတွက် ယခု Review ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Happy Birthday ပါ Mr. Nolan ။ Background and History 1939 ရဲ့September လမှာ Nazi Germany ရဲ့တပ်တွေဟာ Poland နိုင်ငံကို ဝင်ရောက်ကျူးကျော်လိုက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး စတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တယ်။ ထိုအချိန်မှာတင် British နဲ့French တွေက Germany ကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ စတင်ပြီး တရားဝင် စစ်ကြ
True Stories Comedy Drama
Bobby Riggs စိန်ခေါ်တဲ့ တင်းနစ်ရိုက်ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာ ကွင်းထဲကို မဝင်ခင် interview သမားတစ်ယောက်က Billie Jean ကို ဘာမေးသလဲဆိုတော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် ပိုတော်တယ်။ ပိုသာတယ်လို့ထင်သလား တဲ့။ Billie Jean က ချက်ချင်းလှမ်းဖြေလိုုက်တယ်။ အခု ဒီယှဉ်ပြိုင်ပွဲကြီးထဲကို သူမဝင်ရောက်လာတာဟာ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် ပိုတော်တယ်ဆိုတာကို ပြချင်လို့မဟုတ်ဘူး။ အားကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့၊ နောက်ဆုံးလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ တန်းတူညီတဲ့ အခွင့်အရေး ရရှိဖို့ပဲဆိုတာ လှမ်းပြောလိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်။ သူမက ဖို မ ခွဲခြာ
(Spoilers Alert*) . > “As long as you can still grababreath, you fight. You breathe... keep breathing.” - Hugh Glass . The Revenant ရုပ်ရှင်ကို ကျွန်တော်တို့ကနဦးစွာမြင်တဲ့အမြင်က လက်စားချေခြင်းဆိုတဲ့ ဝေါဟာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ဖွင့်ဆိုလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားဆိုတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ ထိုရုပ်ရှင်ကို ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေးတိုင်း အဓိပ္ပာယ်တွေ ပြောင်းလဲသွားတယ်။ နောက်ဆုံး ကျွန်တော်သိလိုက်ရတာက The Revenant ရုပ်ရှင်ဟာ လူသားနဲ့သဘာဝတရားတို့ရဲ့အားပြိုင်မှု တစ်ခုပဲလို့။ တစ်ကယ်တော့ သူလက်စားချေခဲ့တာကလည်း သဘာ